XOG: Galmudug oo lagu qabtay nin waday lacag doollar been abuur ah, xagee buu kala yimid? | HalQaran.com
XOG: Galmudug oo lagu qabtay nin waday lacag doollar been abuur ah, xagee buu kala yimid?
Cadaado (Halqaran.com) – Ciidamada Booliska Galmudug ayaa maanta gacanta ku dhigay nin waday dollar been abuur ah, iyadoo Ciidamada Booliska ay iminka su’aalo weydiinayan ninkan.
Ninkan ayaa waxaa lagu qabtay Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud, ka dib hawlgal ay Ciidamada Booliska ka sameeyeen gudaha Magaalada Cadaado.
Lacagtan ayaa waxaa cadadkeeda lagu sheegay toban kun oo lacagta Mareykanka ah ($10,000), waxaana la sheegay in lagu raadjooggo ninkii lacagtaasi loo waday.
Saraakiil Booliska Galmudug ka tirsan ayaa waxaa laga soo xigtay in lacagtaasi laga keenay Magaalooyinka Baledweyne iyo Gaalkacyo ee Gobolada Hiiraan & Mudug.
Saraakiisha ayaa waxay kaloo sheegeen in ninkan ay hadda su’aalo ku weydiinayan mid ka mid ah xarumaha hay’adaha ammaanku ku leeyihiin Magaalada Cadaado, isla-markaana ay ku daba jooggaan ninkii lacagtaasi loo waday.
Ugu dambeyn, deegaanada Galmudug ayaa waxaa ku badan lacagaha been abuurka ahi ee lagu qabto, xilli siyaabooyin kala duwan looga keeno Magaalooyinka Gobolada Dhexe qaarkood.
Lacag dollar been abuur ah